Warbixin:- Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah ku tagaya dalalka Gobolka. – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa safar deg deg ah ku tagaya dalalka Gobolka, si uu taageero milateri ugu helo guluf dagaal oo ay dowladiisu qorsheyneyso inay dhowaan ku qaado Al-Shabaab.
Uganda oo ah dalka ugu badan ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayuu ka codsan doonaa Madaxweyne Farmaajo, inay ka qeyb qaataan gulufka dagaal ee lagu qaadi doono Al-Shabaab.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa balan qaaday inuu dagaalkaas hoggaamin doono oo uu diyaar u yahay in naftiisa uu ku bixiyo, isagoo ku booqan doona ciidamada furimaha dagaalka, waxaana uu u guuri doonaa Afgooye.
Weerarkii 14-kii bishan ka dhacay Isgoyska Zoobe oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo ruux ayay dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay ka dambeyso weerarkaas Kooxda Alshabaab, waxaana wixii weerarkaas ka dambeeyay madaxda dowladda sheegeen in dalka uu galayo xaalad dagaal.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow xooggan ugu jirta guluf dagaal oo lagu qaado Al-Shabaab, waxayna dhowaan is bedelo ku sameysay dhanka hoggaanka ciidamada, iyadoo la magacaabay Taliyeyaal ciidan, sida Taliyaha xoogga dalka, Taliyaha qeybta 12ka April iyo Abaanduulaha qeybtaas, hase ahaatee waxaa ay su’aal dul saaran tahay, sida dowladdu u qaadi karto howl gal, maadaama Wasiir Gaashaandhig uusan dalka laheyn, kaddib markii Wasiirkii hore, C/rashiid C/llaahi uu is casilay.